Gabar Soomaali ah oo lagu kufsaday Nauru - BBC Somali
Gabar Soomaali ah oo lagu kufsaday Nauru
12 Oktoobar 2015
Gabar Soomaali ah oo la sheegay in lagu kufsaday jasiiradda Nauru, ayaa Australia timid.
Gabadhan oo 23 jir ah, dooneysana in ilmaha looga soo rido Australia, ayaa toddobaadyo ka hor dalbatay in laga qaado Nauru oo qeybka ah shabakadda dhulka xeebaha Australia, waxaana deggan dad magangalyo doon ah. Maxkamadda sare ee Australia, ayaa haatan eegeysa sharci ahaanshaha xarumahaasi.
Kumanyaal ruux, ayaa dhammaadkii toddobaadka dhigay dibadbax ay qaxootiga ku taageerayaan, iyaga oo ku baaqay in xeryahaasi la xiro.
Dhinaca kale, Nauru, ayaa iska fogeeysay in haweeney kale oo qaxooti Soomaali ah, ay kufsadeen labo nin oo jasiiradda u dhashay.
Siyaasadda adag ee magangalyo doonka Australia, ayaa muhaajir kasta oo isku daya in si aan rasmi aheyn uu ku soo galo dalka, ku hayneysa xarumaha jasiiradaha Nauru, Manus iyo Papua New Guinea.
Dowladdu, waxay sheegtay in ay tani ka celineyso kuwa dadka dhuumaaleysiiya, balse waxaa jira dhaliil ku aadan xaaladaha xarooyinkaasi.
Gabadhan Soomaaliyeed, ayaa la sheegay in uurkeedu uu ka badan 12 toddobaad. Waxayna sheegtay in dadka Nauru ay kafsadeen.
Ilma soo rididda, ayaa ka mamnuuc ah jasiiradda marka laga reebo hadii hooyadu ay nolosheedu khatar ku jirto. Kufsigana looma arko sabab ilmo loo soo rido. Waxaana saaran dowladda Australia cadaadis ah in haweeneydan u ogolaato in ay dalka soo gasho si loo daaweeyo.
"Gabadhan, ayaa haatan ku sugan Australia, waxayna dowladdaha Commonwealth ogolaaden in ay bixiyaan daaweynteeda", ayuu sheegay George Newhouse oo qareenkeeda ah.